Uphengululo lweMveliso ye-E-yorhwebo: Izizathu ezi-7 zokuba uPhononongo lwe-Intanethi lubalulekile kwiBrand yakho | Martech Zone
Umntu unokuba uqaphele ukuba kuya kusiba yinto exhaphakileyo kumashishini, ngakumbi lawo akwicandelo le-e-commerce, ukubandakanya uphononongo kwiiwebhusayithi zabo. Ayisiyomeko yefashoni, kodwa luphuhliso olubonakalise ukuba lusebenza kakuhle ekufumaneni ukuthembela kwabathengi.
kuba amashishini e-commerce, kubalulekile ukuphumelela ukuthembela kwabathengi, ngakumbi okokuqala, kuba akukho ndlela kubo yokubona iimveliso ngokwenyani. Abathengi abaninzi bayathandabuza ukuthenga kwiivenkile ezincinci ze-Intanethi njengoko kubonakala ngathi bathembekile kancinci xa kuthelekiswa nabadlali abakhulu.
Esinye sezixhobo ezinceda ukujongana noku kuphononongo lwe-Intanethi, kwaye ezi zezinye zezona zizathu zibalulekileyo zokuba kufuneka uziphumeze kwindawo yakho:
Kutheni uphononongo olukwi-Intanethi lubalulekile kwimpawu yakho
Uphengululo olukwi-Intanethi luqhuba ukuthengwa Isizathu sokuqala sokuba kutheni kubalulekile ukuba uphawu lwakho lube nalo uphononongo kwi-Intanethikukuba ichaphazela abantu ukuba bathenge. Kwakhona, oku kuyafuneka ikakhulu kubathengi bexesha lokuqala kuba bengenamava ngaphambili kwishishini lakho. Kuba uphononongo lwe-Intanethi lukhulisa ubungqina boluntu, kwaye kuba uphononongo olwenziwe kwi-Intanethi luvela kwabanye abathengi, abathengi abatsha kunokwenzeka ukuba baqwalasele kwaye bathenge. Abathengi bexesha lokuqala baxhomekeke kakhulu kwingxelo evela kubathengi abanamava nawe, kwaye ukuba ingxelo iyakhuthaza ngokwaneleyo, abathengi bexesha lakho lokuqala banokukwazi ukugqiba ukuthenga kwabo.
Ukuphononongwa kwi-Intanethi kukwenza ube visibl ngakumbie -Ukuphononongwa kwi-Intanethi ngumxholo ngokwawo. Umxholo yenye yezona zinto zibalulekileyo ekusebenzeni kweinjini yokukhangela, ke ukuba umxholo ngophononongo kwi-Intanethi kunokunceda ukwenza uphawu lwakho lubonakale ngakumbi. Eyona nto intle ngayo kukuba ivela kubathengi bakho ngenxa yoko awuzukufuna ukuchitha umzamo ongakumbi kule ndawo. Mhlawumbi umceli mngeni apha kukukhuthaza abathengi bakho ukuba banike ingxelo yabo, kwaye ngethemba lokuba banikezela ngezinto ezilungileyo.
Ukuphononongwa kwi-Intanethi kukwenza ubonakale uthembekile-Kwiphambili ekubalulekeni kokujongwa kwakhona kwe-Intanethi kukuba kukonyusa ukuthembakala kophawu lwakho. Kuchanekile kakhulu ukuba kunzima kangakanani ukufumana ukuthembela kubathengi bexesha lokuqala, ngakumbi ukuba uphawu lwakho aluthandwa kangako. Ngokwenza uphononongo kwi-Intanethi, usebenza ukuphucula ukuthembeka kwegama lakho. Qinisekisa ukuba wenza konke okusemandleni akho ukufumana ubuncinci kwishishini lakho ngokubanzi, kunye ukongeza iifoto zemveliso ekumgangatho ophezulukunye neminikelo kuba izifundo zibonise ukuba amanqaku angaphantsi kweenkwenkwezi ezine alichaphazela njani ishishini kunye namathuba emveliso okuphumelela kwintembeko yabathengi bexesha elizayo. Kodwa ungaze uthabathe amanqaku akho - oku kuyasilela, kwaye akufuneki uthathe le ndlela.
Ukuphononongwa kwi-Intanethi kwandise iincoko malunga nawe Enye into entle malunga nokuphononongwa kwi-Intanethi kukuba iyanceda ukusasaza igama lophawu lwakho. Uphengululo oluqinisekileyo olwenziwe ngabathengi, ngakumbi xa kubonisiwe kwindawo yakho, khuthaza aba bathengi ukuba babelane nabo kuthungelwano lwabo, ukuvumela uphawu lwakho ukuba lufike kwezi zithuba. Yenza konke okusemandleni akho ukubonisa ingxelo ebalaseleyo yabathengi, kwaye uziqhelanise nokuphendula kwezi ngxelo. Kuya kuba kuhle kakhulu ukuba iinzame zakho zokubonisa ingxelo yabathengi zidlula indawo yakho. Yenze kwisiteshi sakho sentengiso yeendaba zentlalo. Ngale ndlela, kuya kuba lula ngakumbi kubathengi bakho ukuba babelane ngale nto.
Uphengululo olukwi-Intanethi luya lubalulekile ekuthathweni kwezigqibo -Ukuqonda ukubaluleka kokujongwa kwakhona kwe-Intanethi, uya kunyanzeleka ukuba uqaphele ukuba kufanele ukuba yinxalenye yesicwangciso sakho sentengiso. Kubaluleke ngakumbi kunangaphambili ukuba uyenze le nto xa usenza amaphulo akho. Kuya kufuneka uphathe uphononongo lwe-Intanethi njengephulo ngokwakho, oza nezicwangciso ezahlukeneyo ezijolise ekukhuliseni amandla akho okufumana ingxelo elungileyo, kunye nokwandisa iziphumo. Apho kunokwenzeka, zama nokuzidibanisa namanye amaphulo akho. Zama ukuza nezinto ezithandekayo ezinje kukhuphiswano apho abathengi bakho baya kukubonelela ngeyona mpendulo yabo kwiimveliso zakho. Unyanzelekile ukuba ufumane ingxelo eninzi ngale ndlela.
Ukuphononongwa kwi-Intanethi kunefuthe elithile kwintengiso Ngelixa bekukhankanyiwe ukuba uphononongo olwenziwa kwi-intanethi luchaphazela ukuthengwa, kwaye ngenxa yoko ukuthengisa kuya kuchaphazeleka ngokuqinisekileyo, kwenza okungaphezulu koko yandisa ukuthengisa kwakho. Ukuphononongwa kwi-Intanethi akuphumeleli kuphela abathengi bexesha lokuqala, kodwa kukwaphucula ukuthembeka kwebrendi, ukuvumela abathengi bakho ukuba baqhubeke nokwenza ishishini nawe. Kwaye okoko ugcina ukubonelela ngeemveliso ezisemgangathweni kunye neenkonzo, uya kuqhubeka nokufumana ingxelo elungileyo, kwaye umjikelo uyaqhubeka. Kubalulekile ukuba uhambisane nokuzinikezela kwakho kumgangatho. Ngokwenza oku, uqinisekile ukonyusa ukuthengisa kwakho ngokuqhubekayo.
Uphengululo olukwi-Intanethi likunika umgca ovulekileyo kubathengi Okokugqibela, uphononongo olukwi-Intanethi lisebenza njengejelo lonxibelelwano nabathengi bakho. Kwaye isimilo sanamhlanje sifuna ukuba amashishini aphendule. Oku akukhathaleki nokuba ingxelo intle okanye ayilunganga. Ngelixa kumnandi kakhulu kwaye kulula ukuphendula kwimpendulo eyakhayo, kuya kufuneka uphendule kwizinto ezimbi. Kuya kufuneka ubonise abanye abathengi bakho ukuba uza kukwazi njani ukujongana nayo nayiphi na ingxelo emibi enokunikezelwa ngabathengi bakho. Kwakhona, awuvumelekanga ukuba ujonge ingxelo efunyanwa lishishini lakho. Into ekufuneka uyenzile kukujongana nabo ngqo. Kuya kufuneka ubonakalise ukuba ishishini lakho liyibambe ngokuqinileyo le meko.
Sebenza kuhlolo lwakho olukwi-Intanethi ukonyusa uphawu lwakho
Isizathu esingentla sicacisa gca ukuba kutheni kubalulekile ukuba ishishini lakho lisebenzise uphononongo lwe-Intanethi. Ukuba awukabinayo okwangoku, qiniseka ukuba uqala ngoku. Ukuba sele wenze, qiniseka ukuba usebenza kuyo nangakumbi ukuze ukwazi ukwandisa izibonelelo onokuzifumana kuyo. Ukuba nohlolo olukwi-Intanethi kwishishini lakho kubalulekile. Oku akunakuthethathethwano ngoko ke qiniseka ukuba uyisebenzisa kangangoko unakho.
tags: abathengiukwenza isigqiboe-commerceUphengululo lwe-Intanethi